Alshabaab oo qabsatay Degaan u dhow Degmada Balcad iyo Wararkii ugu danbeeyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo qabsatay Degaan u dhow Degmada Balcad iyo Wararkii ugu danbeeyay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maleeshiyada Alshabaab ayaa Saaka weerar culus ku qaaday Degaanka Qalimow oo u dhow, degmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe.
Alshabaab ayaa sheegtay inay qabsadeen tuuladaasi, ayna cagta mariyeen saldhigii ciidamada dowladda ee halkaa ku yaallay, iyagoo ku dilay saddex askari, halkaasi ka qaatay Saanad hub ah, kadib markii ay firxadeen ciidamadii halkaasi ku sugnaa.
Dadka degaanka ayaa sheegay inuu dagaal culus oo muddo socday uu saaka ka dhacay Tuulada Qalimow, waxaana dagaalka uu keenay in Alshabaab ay halkaasi gadaal in muddo ahna qabsadeen, iyagoo kadib dib uga baxay.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ayaa dhinacooda sheegeen inay fashiliyeen weerarkii kaga yimid Al-Shabaab, ayna gaarsiiyeen qasaare badan.
Maha markii ugu horeysay ee Alshabaab weerar ku galaan degaanada Balcad iyo Tuulooyinkeeda, waxayna dhowaan saacado qabsadeen degmada Balcad ee Gobolka Sh/Dhexe.
Previous articleWaxa iiga baxay warkii oday Farmaajo!: Nin la soo qasbay oo dhibban (Qormo Faaqidaad ah)
Next articleSomali-American Hamse Warfa picked to join Biden administration